Onyinye ụwa nke HGH - HGH Phuket
Onyefe ụwa nke HGH
HGH anyị na-ere ọgwụ na Bangkok na-enyefe mba niile nke ụwa site na ọrụ nzipu ozi UPS, ọ na-ewe ụbọchị 2-3. Anyị na-ekwe nkwa nnyefe na Australia, USA, Canada, United Kingdom, Russia, Europe, Asia na mba ndị ọzọ. Iji ...
Onyinye ụwa maka ndị ahịa anyị bụ n'efu na obodo ọ bụla na-aga. E zigara anyị na isi ụlọ ọrụ anyị dị na Bangkok iji EMS Thailand Post. Na mba gị, nnyefe mpaghara na-arụ site na ọrụ nzipu ozi mpaghara.